﻿	သံပုရာထောပတ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
crock အိုး၌မြေပြင်အမဲသားနှင့်အတူ rotel သို့ကျဆင်းလာ
သံပုရာထောပတ် ချိုမြိန်သည် tangy နှင့် zesty အရသာနှင့်အတူစိမ်းဖြင့်။ ဤသံပုရာရည်အားသုံးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်၏နောက်အရသာအတွက်ဤအရသာရှိသောစာရွက်ကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ သံပုရာ meringue ပိုင် မှုတ်သွင်းခံအချိုပွဲ!
ဘဝကမင်းဆီကိုသွန်းလောင်းလိုက်ရင်လုပ်ပါ သံပုရာထောပတ် ! ဒီအရသာပျံ့နှံ့ခြင်း / ဖြည့်စွက်ခြစ်ရာကနေလုပ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူသည်။ ချိုမြိန်တောင့်နှင့် buttery သင်သည်ဤသည်မှာသင်မြည်းစမ်းဖူးသမျှတွင်အကောင်းဆုံးသံပုရာထောပတ်စာဖြစ်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အေးခဲနေသောမက်မွန်သီးကို သုံး၍ မက်မွန်ပိုင်အတွက်ကြော်
Lemon Curd ဆိုတာဘာလဲ
Lemon curd ဆိုသည်မှာယို (သို့မဟုတ်) အချိုပွဲများတွင်သုံးနိုင်သော pudding ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောသံပုရာများအပြင်ဤလွယ်ကူသောစာရွက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်သကြား၊ ကြက်ဥနှင့်ထောပတ်သုံးခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဒါပဲ!
သံပုရာထောပတ်အသုံးပြုသည်: ၎င်းကိုဖန်ခွက်အိုးများတွင်သိုလှောင်ထားလေ့ရှိပြီး၎င်းကိုအလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်သည် ဘီစကွတ် or toast ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရပ်တန့်ကြဘူး! သံပုရာထောပတ်အဆာသည်အချိုပွဲများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
waffle အိမ်ကင်ကြက်သား marinade စာရွက်
ဤရိုးရှင်းသောစာရွက်ကိုပြုလုပ်ခြင်းသည် ၁၊ ၂၊ ၃ ကဲ့သို့လွယ်ကူပြီးအချိန်လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ မီးမရှို့စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ် whisk ပြုလုပ်ရန်သေချာစေပါ။
ဖျော်ရည်နှင့် zest Lemon ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးထူထဲသည်အထိပြီနောက်ဟင်းနှင့်အပူ၌အတူတကွ whisk ။
မယုံနိုင်စရာကြာပွတ် Apple Pie - ပြီးပြည့်စုံသောအဘယ်သူမျှမမုန့်ဖုတ်အချိုပွဲ!
Key Lime Pie Ice Cream လေး - အဘယ်သူမျှမအလွန်အမင်းနှင့်ရေခဲမုန့်ထုတ်လုပ်သူမလိုအပ်ပါ!
စတော်ဘယ်ရီ Rhubarb Pie - ငါ့နွေရာသီသွား -to ပိုင်စာရွက်!
Oreo No Bake ဒိန်ခဲ - အလင်း၊ fluffy နှင့် Oreo တုံးများပါ ၀ င်သည်။
Easy Fruit ပီဇာ - အရည်ရွှမ်းသောအသီးများဖြင့်တင်ထားသည်။
လတ်ဆတ်သော Lemon ထောပတ်
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဤသည်လွယ်ကူသောသံပုရာထောပတ်လတ်ဆတ်သော Lemon မှလုပ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောနွေရာသီအချိုပွဲအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢½ ခွက် လတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်
▢½ ခွက် သကြား
▢⅓ ခွက် ထောပတ်
သံမဏိဖြတ် oats မျှမုန့်ဖုတ် cookies များကို
ထောပတ်နှင့်အတူပြီနောက်ဟင်းထဲသို့ add နှင့်အရောအနှောထူသည်အထိစဉ်ဆက်မပြတ် whisking အလတ်စား - နိမ့်အပူကျော်ချက်ပြုတ်။
သော့ချက်စာလုံးသံပုရာထောပတ် သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။